भरिए अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित आइसियू बेड, मन्त्रालय भन्छ –अझै खाली छ – Health Post Nepal
भरिए अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहित आइसियू बेड, मन्त्रालय भन्छ –अझै खाली छ
२०७८ भदौ ११ गते १९:५०
कोरोना संक्रमणले दोस्रो लहरमा मच्चाएको आतंक अहिले केही शान्त देखिए पनि केही दिनयता अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्यामा उकालो लाग्दै गएको छ। विशेषगरि सघन उपचार कक्ष धमाधम भरिने क्रम बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा १४१ भेन्टिलेटरसहित ३१२ आइसियु बिरामी राख्ने क्षमता छ। त्यसैगरि, २ हजार ७१ एचडियु बेड छन्। मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार ७३ भेन्टिलेटरसहित २०९ संक्रमितको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने एचडियुमा ७२४ छन्।
मन्त्रालयले तथ्यांकले ६८ भेन्टिलेटर, १०३ आइसियु र १ हजार ३४७ एचडियु बेड खाली देखाउँछ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित आइसियु बेड खाली नभएको चिकित्सक बताउँछन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशन डा. अनुप बाँस्तोलाकाअनुसार पछिल्ला केही दिनयता भेन्टिलेटर तथा आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या बढ्दो छ।
अस्पतालमा १३ भेन्टिलेटरसहित १९ जना संक्रमितको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी, कोभिड वार्डमा २७ र क्याबिनमा ७ जना बिरामीको उपचार भइरहेको डा. बाँस्तोला बताउँछन्। टेकु अस्पताल जस्तै अन्य उपत्यकाकाको अस्पतालहरुमा पनि हालत एउटै छ। दोस्रो लहरमा जस्तै संक्रमति ह्वातै बढेको छैन, तर विस्तारै अस्पतालका बेड भने भरिँदै गएका छन्।
निजामति कर्मचारी अस्पताका कोभिड-१९ संयोजक डा. विदेश विष्टले हाल आइसियु बेड खाली नभएको जानकारी दिए। ‘हामीसँग १५ वटा आइसियु क्षमता छ भने १५ वटै आइसीयु भरिएका छन्। अक्सिजन नभएको शय्या भने ३-४ वटा खाली छन्,’ उनले भने।
भक्तपुर र ललितपुरका अस्पतालमा पनि समस्या उस्तै देखिन्छ। अस्पतालको क्षमता भन्दा बढी बिरामी आउनेबित्तिकै अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको भक्तपुर अस्पतालक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले बताइन्।
अस्पतालमा हाल ६ वटा मात्र आइसियु छ भने सबै भरिइसकेको छ। अक्सिजन नभएका केही शय्या खाली भए पनि अक्सिजन नै आवश्यक पर्ने बिरामी आउन थालेको उनी बताउँछिन्।
त्यस्तै, कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर) आइसियुको बेड भरिन थालिसकेका छन्। अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. भुपेन्द्र बस्नेतकाअनुसार अन्य जनरल वार्डमा शय्या खाली रहे पनि आइसियुमा भने दुई-तीन बेड मात्रै खाली छन्।
हाल वीरले कोभिडका ४० आइसियु बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। डा. बस्नेतकाअनुसार २६९ बेड सञ्चालन भएको मध्ये शुक्रबार १२० जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सरकारले तेस्रो लहर आउन सक्छ भनिरहँदा निषेधाज्ञा पनि खुकुलो गरिएको छ। तर, संक्रमणका कारण मध्यम संक्रमितभन्दा पनि गम्भीर भएर आउनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ।
अस्पतालहरूको तथ्यांकले एक–दुई बेड मात्रै खाली देखिन्छ। तर, मन्त्रालयले ठूलै संख्यामा बेड खाली भएको देखाएको छ। टेकूको अस्पतालमा आइसियुको क्षमता २८ शय्या रहेकोमा १० वटा खाली रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
त्यसैगरी, वीर अस्पतालमा ७ वटा आइसियु बाँकी देखिन्छ। तर, डा. बस्नेतका अनुसार २-३ वटामात्र आइसियु खाली छन्। त्यसैगरि, निजामति कर्मचारी अस्पतालमा ८ वटा आइसियु बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा भए पनि अस्पतालको अनुसार सबै बेड भरिएका छन्। त्यसैगरि, भक्तपुर अस्पतालमा एक आइसियु बेड खाली छ।